७ करोडको पिच केही दिनमै यसरी उक्कियो, सिधाकुरा टिममाथी गुण्डागर्दीको प्रयास ! (भिडियोसहित)
- नेपाली सन्देश सोमवार, बैशाख १०, २०७५ , 5.7K जनाले हेर्नुभयो
गोरखा । आँबु खैरेनीदेखि गोरखा बजारसम्मको २४ किलोमिटर सडक कालोपत्रेमा चरम लापरवाही भएको देखिएको छ । आशिष सेवा जेभी पोखराले ७ करोड बढीको लागतको आयोजनामा अहिले सडकको २ छेउमा कालोपत्रे हाल्ने काम भैरहेको छ ।
तर अघि अघि कालोपत्रे पेल्दै जाने पछि पछि उक्कीदै गएको छ । सवारी साधानको चाप पर्दा वित्तिकै कालोपत्र भत्किने गरेको छ ।
एक ठाँउमा मात्रै होइन सडकका विभीन्न ठाँउको कालोपत्रेको अवस्था यस्तै छ ।
यसपछि हामीले काम भैरहेको स्थानमा पुगेर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी राजेन्द्र सापकोटलाई भेट्यौँ । कालोपत्रे कुन लेवलमा कति राख्नु पर्छ भन्नेमा उनि नै अन्योलमा थिए ।
काम धमाधम भैरहेको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीबाट सडकका लागि खटिएका कुनै इञ्जीनियरको त्यहाँ थिएन ।
मात्रै एक सुपरभाइजर थिइन् । उनले पिचको अवस्था यस्तो हुनुपर्ने मात्रै भन्न सकिन् तर पिच यस्तो भैरहेको छ भन्न सकिनन् ।
७४ चैत मसान्तसम्म म्याद रहेको यो आयोजनको २ महिना थप गरी २०७५ जेठसम्म पु¥याइएको छ तर २६ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे थप्ने काम सुरु नै भएको छैन । राज्यको कमजोर निगरानीकै कारण यस्ता सडक कमजोर हुने गर्दछन् ।
गोरखा बारपाकको बाटो जान सिधा कुरा टिमलाई यसरी रोकियो !
गोरखा । गोरखाको घुस काण्ड र सडक कालोपत्रेको रिपोर्टीङ सकेर हामी काठमाडौं फर्किदै थियौँ । गोरखाकै १२ किलो भन्ने स्थानमा आउँदा एउटा टिपरले हाम्रो बाटो छेक्यो । यो ट्रिपरका चालकले आँफुलाइ विपिन पोख्ररेल भन्ने व्यक्तिले यो गाडी रोक्न लगाएको भन्दै हामीलाई अघि बढ्न् दिएनन् ।
जबरजस्ती अघि बढे अर्को ठाँउमा आफ्ना साथिहरुले रोक्ने भन्दै धम्की दिए । यति सम्मकी टिपरबाट ओर्लिएर प्रहरीकै अगाडी उन्ले हाम्रो गाडी रोके ।
गोरखाको बारपाका जाने चोकमा उनले हाम्रो टिमलाई रोकी बारपाक जाने भए केही समय कुर्नु पर्ने बताए । पछि हामी काठमाडौँ तर्फ जादै गरेको भनेपछि उन्ले कुनै अन्य व्यक्ति सँग फोन सम्पर्क गरे ।
फोनमा ती व्यक्तिले काठमाडौँ जाँदै गरेको भए नरोक्न भनी उनलाई भने । तर उन्ले हाम्रो टिमलाई रोकिरहँदा त्यही चोकमा उपस्थित प्रहरी हबल्दारले यो देखेपछि उनलाई प्रहरी चौकीमा उपस्थित हुन भने । हाम्रो टिम पनि यस विषयमा बुझ्न १२ किलो भन्ने स्थानमा रहेको प्रहरी चौकी पुग्यौँ । हामीले घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउँदै लिखित निवेदन दियौँ ।
शुरुमा यही गाडीलाई रोक्न भनिएको भन्ने उनले चौकीमा पुगेपछि भने अकैँ गाडीलाई रोक्न भनिएको र आफुले गल्तीले यो गाडी रोकेको भनी बयान दिए । बयानमा उनले बारपाक सामान पठाउन गाडी रोकेको भने पनि गाडी रोक्दाको उनको रवैया र धम्कीको भाषा भने केही अरुनै बयान गरिरहेको थियो ।
बुटवल यातायात कार्यालयमा ८ सय दिए ८ मिनेटमै काम हुन्छ
हटौंडा । मकवानपुरको जिल्ला अस्पताल हेटौंडा अस्पतालमा चिकित्सक र अस्पताल विकास समितिको मनोमानीका कारण बिरामी निजी अस्पताल तथा किल्नी धाउन बाध्य छन् । अस्पतालमा आउने बिरामी जिल्ला अस्पतालमा नाम दर्ता गराएर उपचार गराउन डाक्टरको फुर्सद कुरेर बस्न बाध्य छन् ।
सरकारले तोकेको सातामा न्युनतमा ४२ घण्टा अस्पतालमा काम गर्नु पर्ने नियम लत्याउँदै अस्तपालले नै सातामा ३५ घण्टा तोकेको छ । अस्पतालका चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कमल दवाडी, बाल रोग बिशेषज्ञ हरी बहादुर खड्का दिउँसो १ बजे देखिनै सोही स्थानको हेटौडा सहकारी अस्पताल, गुराँश मेडिकलमा काम गर्छन । उनिहरुकै समय तोकेर सहकारी अस्पताल र किल्नीले यसरी बिरामीको नाम दर्ता गराइरहेको हुन्छन् ।
अस्पतालको लापरवाही यती मात्रै होइन अस्पतालमा रहेको एक्सरे मेसिनसमेत कर्मचारीहरुले नियतबस बिगारेको भेटिएको छ । केहि साता अघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमनले बाहिर नीजि क्लिनिकको व्यापारका लागि भित्रको एक्सरे मेसिन जानजान हतियार प्रयोग गरेर बिगारेको प्रतिवेदन दिएको छ ।
यती मात्रै होइन अस्पतालमा लामो समय परीक्षणका लागि राख्नु पर्ने तथा वेवारीसे शब राख्ने रेफ्रिजेरेटर समेत बर्षौदेखि बिग्रीएको छ । अस्पतालको सामान्य खर्चमा मात्रै बन्न सक्ने रेफ्रिजेरेटर नबनाउँदा कुनै पनि २ दिन भन्दा बढी राख्न समस्या हुने गरेको छ । source;news24